Scholarship Cofttek - Cofttek Supplements.
Ny olona rehetra dia maniry asa marobe ary fampianarana izay hanampy azy ireo ho lasa lavitra. Na izany aza, maro ny olona mila mamoy ny tanjony sy ny tanjon'ny fampianarana isan-taona. Fantatr'i Cofttek ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana mety ary izany no antony ampianay hanabeazana ny mpamaky anay ao amin'ny Diety Supplements miaraka amin'ny fijerintsika sy ny fanoloran-kevitra.
Ny Scholarship Cofttek dia fampiroboroboana vaovao izay tena reharehantsika ny manambara. Vatsim-pianarana isan-taona 2000 isan-taona no namolavola ny mpianatra hahatratra ny nofinofinofinny fampianarana sy asa. Ity vatsim-pianarana ity dia homena mpianatra iray isan-taona mba hanampy amin'ny fandoavam-bola amin'ny fampianarana. Izahay dia mitady roa heny mampitombo avo roa heny ny mari-pahaizana ho an'ny taona manaraka.
Ohatrinona ny Scholarship?
Ity vatsim-pianarana ity dia hanolotra mpianatra iray $2000 handoavana ny fandaniana. Lalam-pianarana irery ihany izy io ary tsy havaozina mihitsy. Halefa any amin'ny birao ara-bola izany.
Fahaizana nahazo vatsim-pianarana
Izahay dia mitady mpianatra izay afaka mampiasa ny vola atolotray anay. Ireo mpianatra manana diplaoma sy undergrad dia afaka mampihatra, raha toa ka misoratra anarana manontolo andro any amin'ny sekoly misy diplaoma na ao amin'ny oniversite accredited. GPA ambany indrindra (Sokajy Blaoma farafahakeliny) mba hangatahana vatsim-pianarana dia 3.0
Ahoana no azonao ampiharana azy
Afaka mangataka mora foana amin'ny vatsim-pianarana ianao. Namboarina ho tsotra ilay izy mba ahafahana miendrika sy mampihatra. Mpianatra voafetra ihany no mahazo mampihatra, ary mpianatra iray ihany no handresy.
Ity misy fomba ampiharanao:
Atombohy amin'ny alàlan'ny fanoratana lahatsoratra misy teny 500 na mihoatra ny hoe "Mampiasa kokoa ny malaza noho ny hatramin'izay ny famoaham-bola" Azonao atao ny miverina mijery ny iray amin'ireo làlana nofaritanao ary ampiasao izany mba hanazavana amin'ny fomba hanampiana anao hanatsara ny fahaizanao. Tokony ho narotsak'ilay esperto io Desambra 31st, 2020.
Mila mandefa ny rindranasanao ianao [email voaaro] ataovy azo antoka fa ao amin'ny endrika Microsoft Word. Mampiasà adiresy mailakao (edu) fotsiny. Raha mametraka ny fangatahana amin'ny PDF na Google Doc ianao dia tsy ekena izany.
Ny taratasy fangatahana dia tokony hampiditra ireo fampahalalana manaraka ireto: ny anaranao, nomeraon-telefaona, ny anaran'ny oniversite sy ny adiresy mailakao.
Tokony ho voasoratra amin'ny teninao manokana ny karana ary tokony hanan-danja amin'ny mpamaky izany.
Ny fangalarana rehetra dia hiteraka fandefasana hanomboka avy hatrany.
Omena fotsiny ireo fampahalalana efa voafaritra etsy ambony.
Ny bokinao dia hotsaraina eo amin'ny famoronana, ny fisaintsainana ary ny lanjany.
Ny fanekena tsirairay dia nohodinihina tamim-pankatoavana ary tamin'ny 15 Janoary 2021, ny mpandresy dia ho nambara ary hampahafantarina amin'ny alàlan'ny mailaka.
Ny politikantsika momba ny fiainana manokana
Azontsika antoka fa tsy misy fampahalalana manokana ho an'ny mpianatra no zahana, ary ny fampahalalana momba ny tena manokana dia tazomina ho an'ny fampiasana anatiny fotsiny. Tsy manome ny antsipiriany ho an'ny mpianatra ho an'ny antoko fahatelo izahay, fa manana zo hampiasa ireo lahatsoratra natolotra anay amin'ny fomba rehetra irintsika izahay. Raha mandefa lahatsoratra ho any Cofttek ianao dia omenay ny zonay rehetra momba ny atiny, anisan'izany ny fananana atiny voalaza. Marina izany na ekena ny fanekena ho mpandresy na tsia. Ny Cofttek.com dia manana alalana hampiasa ny asa rehetra halefa hamoahana azy araka izay heveriny fa mety sy izay heveriny fa mety.